Firafitra vy ho an'ny orinasa sy mpanamboatra trano be rihana | Honghua
Wuhan sentosa mansion Architectural Characteristics: Concrete tubular feno tubular rafitra (28 gorodona) • rafitra rafitra firafitra napetraka dia ahitana rafitra hazo andry sy tsanganana izay amoron-tsiraka sasany nohosorana masonry, beton nohamafisina, na rindrina nanakana.
Wuhan sentosa mansion Toetra mampiavaka ny rafitrano: rafitra fantsom-bokatra vita amin'ny vy vita amin'ny beton (gorodona 28)
Any amin'ny: No.199, Lalan'i Wansongyuan, Distrikan'i Jianghan, Tanànan'i Wuhan
Tontolo manodidina: Zhongshan park, Wuhan International Convention and Exhibition Center, New World Department Store
Fifamoivoizana: 20 km miala ny seranam-piaramanidina; 3 km miala ny gara;
Rafitra fananganana rafitra napetraka
Ny rafitra rafitry ny rafitra napetraka dia misy rafitra hazo andry sy tsanganana izay natsofok'ireo rindrina sasany tamin'ny masonry, beton nohamafisina, na rindrina nanakana.
Ny rindrina fampidiran-dresaka dia mety ho haavon'ny havoana na hameno tanteraka ny sary.
Ny rindrina dia mety mifandray na tsia amin'ny formwork.
Ny hamafin'ny drafitra sy ny tanjaky ny rindrina dia misoroka ny fikororohana ny andry sy ny tsanganana eo ambanin'ny enta-mavesatra. Vokatr'izany, hihatsara ny fahombiazan'ny rafitra.
Mandritra ny horohoron-tany iray dia miorim-paka ao anaty vina ny diagonal compression struts ka mihetsika toy ny Frame Braced fa tsy Moment Frame ny firafitra.
Izy io dia afaka manangana trano hatramin'ny 30.
Rafitra rindrina manety
Izy io dia rindrina mitsangana mitohy namboarina avy amin'ny beton nohamafisina na rindrina vita amin'ny rindrina.
Ny rindrina manety dia mahazaka ny hery misintona sy ny enta-mavesatra, ary izy io dia toy ny andry cantilever lalina tery.
Matetika, namboarina ho fototry ny trano
Izy io dia mety tsara amin'ny fananganana tranobe avoavo na fananganana vy na vy. Izany dia satria ny rindrina manety dia manana hamafin'ny fiaramanidina sy tanjaka.
Ny rafi-rindrin'ny shear dia mety amin'ny trano fandraisam-bahiny sy trano ipetrahana izay aorinan'ny drafitra miverimberina amin'ny gorodona fa mitohy hatrany ny rindrina.
Mety ho insulator akustika sy afo tena tsara eo anelanelan'ny efitrano sy trano izy io.
rafitra fananganana rindrina manety ny vatan-trano dia mety ho ara-toekarena hatramin'ny rafitry ny fananganana 35.
Ny rindrina manety dia tsy tokony ho simetrika amin'ny drafitra, fa ny symmetry no tiana hialana amin'ny voka-dratsin'ny torsional.
Previous: Toeram-piaran-dalamby haingam-pandeha haingam-pandeha
Manaraka: Tohatra boribory vy